သင့် ကျားအင်္ဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ ၁၀ ချက် – Gentleman Magazine
သင့် ကျားအင်္ဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ ၁၀ ချက်
သင့်ပစ္စည်းတွေအကြောင်း သင်အကုန်သိတယ် ထင်နေပါသလား။ အဲဒါကို ပျော်ရွှင်ကျန်းမာနေစေဖို့က ယောက်ျားတိုင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ သင် ဘယ်လောက်စဉ်းစားစဉ်းစား မရိပ်မိနိုင်တဲ့ ကျားအင်္ဂါနဲ့ ဝှေးစေ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
၁. သင့်လိင်တံနဲ့ အလေးမနိုင်ပါသေးတယ်
Iron Crotch ဆိုတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဟာ ကွန်ဖူးအနွယ်ဝင် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါ။ LA က သိုင်းသင်တန်းကျောင်း တစ်ခုမှာ သင်တန်းသားတွေကို သူတို့ လိင်တံမှာ ကြိုးပါတ်ပြီး အလေးမဖို့ကို သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ အဲဒိက ဆရာဟာ ပေါင် ၈ထောင် လေးတဲ့ လေယဉ်ပျံတစ်စင်းကို လိင်တံနဲ့ ဆွဲပြီး National Geographic မှာ သရုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။
၂. သင့်အင်္ဂါ မာတင်းမှုမှာ Grade တွေ ရှိပါတယ်
သင့်အင်္ဂါ မာတင်းမှုကို Grade လေးမျိုး ခွဲထားပါတယ်။ ကြီးပေမယ့်မမာတာ၊ နည်းနည်းမာတာ (ဆက်ဆံမှု မပြုနိုင်သေးပါ)၊ ဆက်ဆံမှု ပြုနိုင်အောင် မာတာ၊ ကျောက်ခဲလို မာနေတာ ပါ။ အဲဒိ Scale ကို Viagra ကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ၁၉၉၀ ကျော်နှစ်တွေမှာ တီထွင်ခဲ့တာပါ။
၃. ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေလောက် Sensitive ဖြစ်ပါတယ်
သင့်ရဲ့ လိင်အင်္ဂါတွေက အထိအတွေ့ အာရုံခံစားနိုင်မှုက မိန်းမတွေနဲ့ တူတူပါပဲ။ ယောက်ျားတွေအတွက် အာရုံခံစားနိုင်ဆုံးနေရာက လိင်တံထိပ် နဲ့ ကွမ်းသီးလုံးရဲ့ အောက်တည့်တည့် နေရာပါ။ အမျိုးသမီးတွေမှာက အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားငယ်ပါ။
၄. သင့်လိင်တံပေါ်က ဘက်တီးရီးယားဟာ AIDS ဖြစ်အောင် အထောက်အကူပေးပါတယ်
သင့်လိင်တံထိပ်မှာ ဘက်တီးရီးယားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အရေပြားဖြတ်မထားရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ အဲဒိ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ ရောင်ရမ်းမှုကို ဖြစ်စေပြီး HIV ပိုး ပစ်မှတ်ထားတဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ရဲ့ T Cell တွေကို ဆွဲဆောင်စေနိုင်ပါတယ်။
၅. မနက်ပိုင်း ထောင်မတ်တာဟာ လူတချို့မှာ နာကျင်ပါတယ်
ယောက်ျားတွေဟာ ည အနားယူပြီးနောက်မှာ မနက်ပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ရန်အသင့်အခြေအနေနဲ့ နိုးထလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သူတွေမှာ အဲဒါဟာ နာကျင်ပြီး အိပ်ရာကနေ လန့်နိုးတဲ့အထိ စွမ်းဆောင်ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားမှု အရမ်းရှားပါးပြီး ခုထိ အယောက် ၃၀ သာ အဲဒိရောဂါနဲ့ ဆေးရုံရောက်လာပါသေးတယ်။ ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အကြောင်းရင်း မသိရသေးပါဘူး။
၆. သင့် အင်္ဂါကို အမျိုးသမီးတွေက မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်လို မြင်တတ်ပါတယ်
အမျိုးသမီးတွေဟာ ကျားအင်္ဂါတွေကို နဂိုဆိုဒ်ထက် ပိုကြီးနေတယ်လို့ မြင်မှတ်ထားတတ်ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်က စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာ အမျိုးသမီး ၄၁ဦး ကို ကျားအင်္ဂါအတု တစ်ခုစီ ကိုင်ထားစေပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါကို တခြား ဆ်ုဒ်တွေနဲ့ ရောလိုက်ပြီး သူတို့အရင်ကိုင်ခဲ့တဲ့ဟာကို ရွေးခိုင်းတဲ့အခါ ပိုကြီးတဲ့ဟာကိုပဲ အားလုံးက ရွေးကြပုတယ်။
၇. သင့်အင်္ဂါကို အပေါက် ကြိုက်သလောက် ဖောက်နိုင်ပါတယ်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အပေါက်အများဆုံး စံချိန်တင်ထားတဲ့ ယောက်ျားမှာ အပေါက် ၄၅၃ ပေါက် ရှိပါတယ်။ ၂၇၈ ခုက သူ့လိင်အင်္ဂါမှာပါ။
၈. တချို့လူတွေက ဘောကို အကန်ခံရတာကို ကြိုက်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒါကို လန့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကောင်တွေက အဲဒါကို Feel ခံတတ်ကြပါတယ်တဲ့။ Youtube မှာ ballbusting အတွက် အဖြေ 33000 နီးပါး ရှိပါတယ်။ ဂျပန်မှာဆို အဲဒါအတွက် နာမည်တောင် ရှိပါတယ်။ Tamakeri ပါ တဲ့။
၉. ဝှေးစေ့ကို လိမ်မိတာဟာ သင့်ကို ဥတစ်လုံးတစ်ကောင်ကြွက် ဖြစ်စေပါတယ်
သင့်ဘောနှစ်လုံးဟာ နားကျပ်တွေလို လိမ်မသွားပါဘူး။ နှစ်ခုကြားမှာ အမြှေးပါးလေး ခံထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ ဥ တစ်လုံးထဲကို လိမ်မိလိုက်ရင်တော့ အရမ်းနာပါတယ်။ ပြီးတော့ ဝှေးစေ့ပြွန်တင်းမာစေပြီး အချိန်မှီမကုရင် ဥတစ်လုံး ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ်။ စက်ဘီးသမားတွေမှာ အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။
၁၀. ထောင်မတ်နေချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေ ချတတ်ပါတယ်
ယောက်ျားတွေ စိတ်ပါနေရင် သူတို့ဟာ မြင်မြင်သမျှ အရာအားလုံးကို လိင်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ မှတ်ယူကြပါတယ်။ အမျိူးသမီး ဖိနပ်ကအစ၊ ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့ အဆုံးပါ။ ပြီးတော့ သူတို့ကောင်မလေးနဲ့ အိပ်ရဖို့ ဘာမဆို ကြိုးစားချင်တတ်ပါတယ်။ တရားဝင်ဝင် မဝင်ဝင်ပါ။
သငျ့ ကြားအင်ျဂါအကွောငျး သိကောငျးစရာ ၁၀ ခကျြ
သငျ့ပစ်စညျးတှအေကွောငျး သငျအကုနျသိတယျ ထငျနပေါသလား။ အဲဒါကို ပြျောရှငျကနျြးမာနစေဖေို့က ယောကျြားတိုငျးရဲ့ ရညျရှယျခကျြပါ။ သငျ ဘယျလောကျစဉျးစားစဉျးစား မရိပျမိနိုငျတဲ့ ကြားအင်ျဂါနဲ့ ဝှေးစရေဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတှေ ရှိနပေါသေးတယျ။ အဲဒါတှကေတော့
၁. သငျ့လိငျတံနဲ့ အလေးမနိုငျပါသေးတယျ
Iron Crotch ဆိုတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးဟာ ကှနျဖူးအနှယျဝငျ လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုပါ။ LA က သိုငျးသငျတနျးကြောငျး တဈခုမှာ သငျတနျးသားတှကေို သူတို့ လိငျတံမှာ ကွိုးပါတျပွီး အလေးမဖို့ကို သငျကွားပေးနပေါတယျ။ အဲဒိက ဆရာဟာ ပေါငျ ၈ထောငျ လေးတဲ့ လယေဉျပြံတဈစငျးကို လိငျတံနဲ့ ဆှဲပွီး National Geographic မှာ သရုပျပွခဲ့ပါတယျ။
၂. သငျ့အင်ျဂါ မာတငျးမှုမှာ Grade တှေ ရှိပါတယျ
သငျ့အင်ျဂါ မာတငျးမှုကို Grade လေးမြိုး ခှဲထားပါတယျ။ ကွီးပမေယျ့မမာတာ၊ နညျးနညျးမာတာ (ဆကျဆံမှု မပွုနိုငျသေးပါ)၊ ဆကျဆံမှု ပွုနိုငျအောငျ မာတာ၊ ကြောကျခဲလို မာနတော ပါ။ အဲဒိ Scale ကို Viagra ကို စမျးသပျခဲ့တဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ၁၉၉၀ ကြျောနှဈတှမှော တီထှငျခဲ့တာပါ။
၃. ယောကျြားတှဟော မိနျးမတှလေောကျ Sensitive ဖွဈပါတယျ
သငျ့ရဲ့ လိငျအင်ျဂါတှကေ အထိအတှေ့ အာရုံခံစားနိုငျမှုက မိနျးမတှနေဲ့ တူတူပါပဲ။ ယောကျြားတှအေတှကျ အာရုံခံစားနိုငျဆုံးနရောက လိငျတံထိပျ နဲ့ ကှမျးသီးလုံးရဲ့ အောကျတညျ့တညျ့ နရောပါ။ အမြိုးသမီးတှမှောက အတှငျးနှုတျခမျးသားငယျပါ။
၄. သငျ့လိငျတံပျေါက ဘကျတီးရီးယားဟာ AIDS ဖွဈအောငျ အထောကျအကူပေးပါတယျ
သငျ့လိငျတံထိပျမှာ ဘကျတီးရီးယားတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ အရပွေားဖွတျမထားရငျ ပိုဆိုးပါတယျ။ အဲဒိ ဘကျတီးရီးယားတှဟော ရောငျရမျးမှုကို ဖွဈစပွေီး HIV ပိုး ပဈမှတျထားတဲ့ ကိုယျခံအားစနဈရဲ့ T Cell တှကေို ဆှဲဆောငျစနေိုငျပါတယျ။
၅. မနကျပိုငျး ထောငျမတျတာဟာ လူတခြို့မှာ နာကငျြပါတယျ
ယောကျြားတှဟော ည အနားယူပွီးနောကျမှာ မနကျပိုငျးမှာ အလုပျလုပျရနျအသငျ့အခွအေနနေဲ့ နိုးထလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့သူတှမှော အဲဒါဟာ နာကငျြပွီး အိပျရာကနေ လနျ့နိုးတဲ့အထိ စှမျးဆောငျပါတယျ။ ဖွဈပှားမှု အရမျးရှားပါးပွီး ခုထိ အယောကျ ၃၀ သာ အဲဒိရောဂါနဲ့ ဆေးရုံရောကျလာပါသေးတယျ။ ဖွဈပှားစတေဲ့ အကွောငျးရငျး မသိရသေးပါဘူး။
၆. သငျ့ အင်ျဂါကို အမြိုးသမီးတှကေ မကောငျးဆိုးဝါးတဈကောငျလို မွငျတတျပါတယျ
အမြိုးသမီးတှဟော ကြားအင်ျဂါတှကေို နဂိုဆိုဒျထကျ ပိုကွီးနတေယျလို့ မွငျမှတျထားတတျပါတယျ။ ကယျလီဖိုးနီးယား တက်ကသိုလျက စမျးသပျမှုတဈခုမှာ အမြိုးသမီး ၄၁ဦး ကို ကြားအင်ျဂါအတု တဈခုစီ ကိုငျထားစပေါတယျ။ ပွီးတော့ အဲဒါကို တခွား ဆျုဒျတှနေဲ့ ရောလိုကျပွီး သူတို့အရငျကိုငျခဲ့တဲ့ဟာကို ရှေးခိုငျးတဲ့အခါ ပိုကွီးတဲ့ဟာကိုပဲ အားလုံးက ရှေးကွပုတယျ။
၇. သငျ့အင်ျဂါကို အပေါကျ ကွိုကျသလောကျ ဖောကျနိုငျပါတယျ
ကမ်ဘာပျေါမှာ ကိုယျခန်ဓာမှာ အပေါကျအမြားဆုံး စံခြိနျတငျထားတဲ့ ယောကျြားမှာ အပေါကျ ၄၅၃ ပေါကျ ရှိပါတယျ။ ၂၇၈ ခုက သူ့လိငျအင်ျဂါမှာပါ။
၈. တခြို့လူတှကေ ဘောကို အကနျခံရတာကို ကွိုကျပါတယျ
ကြှနျတျောကတော့ အဲဒါကို လနျ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့ကောငျတှကေ အဲဒါကို Feel ခံတတျကွပါတယျတဲ့။ Youtube မှာ ballbusting အတှကျ အဖွေ 33000 နီးပါး ရှိပါတယျ။ ဂပြနျမှာဆို အဲဒါအတှကျ နာမညျတောငျ ရှိပါတယျ။ Tamakeri ပါ တဲ့။
၉. ဝှေးစကေို့ လိမျမိတာဟာ သငျ့ကို ဥတဈလုံးတဈကောငျကွှကျ ဖွဈစပေါတယျ
သငျ့ဘောနှဈလုံးဟာ နားကပျြတှလေို လိမျမသှားပါဘူး။ နှဈခုကွားမှာ အမွှေးပါးလေး ခံထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ ဥ တဈလုံးထဲကို လိမျမိလိုကျရငျတော့ အရမျးနာပါတယျ။ ပွီးတော့ ဝှေးစပွေှ့နျတငျးမာစပွေီး အခြိနျမှီမကုရငျ ဥတဈလုံး ဆုံးရှုံးရနိုငျပါတယျ။ စကျဘီးသမားတှမှော အဖွဈမြားတတျပါတယျ။
၁၀. ထောငျမတျနခြေိနျမှာ ဆုံးဖွတျခကျြအမှားတှေ ခတြတျပါတယျ
ယောကျြားတှေ စိတျပါနရေငျ သူတို့ဟာ မွငျမွငျသမြှ အရာအားလုံးကို လိငျဆှဲဆောငျမှုရှိတယျလို့ မှတျယူကွပါတယျ။ အမြိူးသမီး ဖိနပျကအစ၊ ဆေးလိပျမီးခိုးငှေ့ အဆုံးပါ။ ပွီးတော့ သူတို့ကောငျမလေးနဲ့ အိပျရဖို့ ဘာမဆို ကွိုးစားခငျြတတျပါတယျ။ တရားဝငျဝငျ မဝငျဝငျပါ။
Previous: သင့် ဉာဏ်ရည်တိုးစေဖို့ နေ့တိုင်းလုပ်သင့်တဲ့ အပြုအမူများ
Next: ကြီးအောင်လုပ်လို့ရလား ?